Silk Fibroin porous Scaffold - China Simatech
Dabere na ahịa 'mkpa, na-acha ọcha, na-agbanwe na porous scaffolds nwere ike na-nyere na ihe ọ bụla udi (cylinder, disk, cube, wdg) na akụkụ.
Dabere na ahịa 'mkpa, na-acha ọcha, na-agbanwe na porous scaffolds nwere ike na-nyere na ihe ọ bụla udi (cylinder, disk, cube, wdg) na akụkụ. The interconnected nnukwu pores na scaffolds ikwado njem nke nri, ikwe mkpụrụ ndụ ka ịgbakwunye, proliferate na ọdịiche dị na na vitro na na naa ọmụmụ.
P arameter na Njirimara
Pore size nwere ike iche na a nso nke 100-1000 micrometers; Porosity: ≥ 90%
Ngwaahịa a bụ a ahaziri ngwaahịa. Anyị nwere ike inye usoro nke porous Scaffolds dị ka gị na-arịọ.
Previous: Silk Fibroin Ngwọta
Regenerated silk Fibroin porous Scaffold